eHimalaya Online || News from nepal » जान्नुहोस् महिलाहरुको ५ बानी जुन पुरुषहरु झट्टै मन पराउछ्न ।
२०७८ माघ ३ गते सोमबार || 2022 Jan 17 Monday
जान्नुहोस् महिलाहरुको ५ बानी जुन पुरुषहरु झट्टै मन पराउछ्न ।
२०७७ पुस २४ गते शुक्रबार १०:५१
पुरुष हरुलाई केटीको रुप रङ्गले प्रभावित गर्छ नै, त्यो हेर्ने मात्र आकर्षणको कुरा हो । पुरुषहरूकले महिलामा पनि धेरै गुणहरू देख्न सक्छ्न । पुरुषहरूले पनि यस्तो महिलाको साथ खोज्छन् जसले सम्बन्धलाई सन्तुलन गरि र उनीहरूसँगै अगाडि...
पुरुष हरुलाई केटीको रुप रङ्गले प्रभावित गर्छ नै, त्यो हेर्ने मात्र आकर्षणको कुरा हो । पुरुषहरूकले महिलामा पनि धेरै गुणहरू देख्न सक्छ्न । पुरुषहरूले पनि यस्तो महिलाको साथ खोज्छन् जसले सम्बन्धलाई सन्तुलन गरि र उनीहरूसँगै अगाडि बढोस । यही कारण हो कि पुरुषहरूकले महिलालाई नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्छन्, उनीहरूको व्यावहारिकता, सोच, परिपक्वता आदि गुणहरूको परीक्षण गर्छन् । ,
जान्नुहोस् महिलाहरुको ५ बानीहरू जुन पुरुषहरुलाई चाँडै मन पर्दछ ।
परिवार र साथीहरुको मान सम्मान गर्ने
महिलाहरु जसले पुरुषको साथसाथै उनीहरूको परिवार र साथीहरूलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूको परिवारलाई उनीहरूको रूपमा स्वीकार्न थाल्छन्, त्यस्ता महिलाहरुले पुरुषको मन छिटो जित्छन् । धेरै महिलाहरु पुरुषको साथी मन पराउँदैनन्,यस्तो महिलाहरुलाई पुरुषले रुचाउदैनन ।
अतितका कुरा बिचमा नल्याउने
धेरै महिलाहरू विगतका कुराहरु निकालेर वा पुरुषका पुरानो सम्बन्धको बारेमा जिस्काउदै आनन्द प्राप्त गर्दछन् । पुरुषहरुलाई त्यस्तो महिलाहरु मन पर्दैन । तिनीहरू आफूलाई समयमा नै त्यस्ता महिलाबाट टाढा जान मन पराउछ्न । किनकि यस्तो महिलाहरुले उनीहरूको मा,नसिक त,नाव दिने गर्दछन ।
बुझ्ने महिलाले पुरुषलाई उनीहरूको कुरा नगरी शंंंंका गर्दैनन्, पुरुषहरु त्यस्ता महिलालाई धेरै सम्मान गर्दछन् । श ,्कास्पद, बहस गर्ने महिला पुरुषहरुको टाउको दुखाई नै बन्दछन किनकि यस्तो महिलाहरु अनजानमै पुरुषको चरित्र माथि औंला उठाउँछन् ।
व्यक्तिगत ठाउँ दिने
सबैको आ-आफ्नो व्यक्तिगत ठाउँ हुन्छ र जुन महिलाहरु यस्तो कुरा बुझ्छन् र पुरुषहरुलाई व्यक्तिगत ठाउँ दिन्छ, पुरुषले कहिले पनि ती महिलाको साथ छोड्दैनन जुन महिला बारम्बार फोन गरि रहन्छन र सताउँदछन्, पुरुषहरु त्यस्तो महिलाप्रती बिस्तारै बोर हुन्छन । टाढिन थाल्छन ।
आत्मनिर्भर महिलाहरुप्रती पुरुढहरु धेरै चाँडो प्रभाव हुने गर्दछन किनभने आत्मनिर्भर महिलाहरु पनि परिपक्व हुन्छन् कि तिनीहरूले सबै परिस्थितिहरू बुझ्छन र ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन्छन । पुरुषहरु आत्मनिर्भर महिलाको अगाडि आफ्नो कुरा भन्न रुचाउँछन् किनकि उनीहरूलाई थाँहा छ कि उनीहरूले त्यो कुरा राम्ररी बुझ्छन र सही सल्लाह दिनेछन् ।
प्रकाशित मिति २०७७ पुस २४ गते शुक्रबार १०:५१
हलिउड प्रसिद्ध पप गायिका केटि पेरीले ट,प लेस पोज र बियर क्यानको ब्रा लगाएपछी त,हल्का हेरौ भिडियोमा ।
काली काली हिस्सी परेकी वलिवूडकि ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोप्डाको रातो पारदर्शी पहिरनमा हट पोजमा फिदा बने फ्यान, हेरौ केही तस्बिरमा ।
फेशन ट्रेन्डको नाममा ब्रालेस शैलीमै प्रायः किन देखिने गर्छन सुन्दरीहरु ? (फोटोफिचर)
अभिनेता अर्जुन कपूरसँग ब्रे,क अप पछि झनै छोटो ड्रेसमा बोल्ड रुपमा देखिइन मलाइका हेरौ यी तस्बिरमा ।
२५ बर्षिय चन्चले अभिनेत्री रश्मिका मन्दना को मन दुई सन्तानको बाबुमा पुगेपछि। हेरौ यी तस्बिरमा।
अभिभावक हुनुहुन्छ? भुलेर पनि यी ४ कुरा नभन्नुहोस आफ्ना बच्चाहरुलाई दिमागमा पर्छन् यस्ता अ,सर।
२०७८ साउन ३ गते आईतबार ०१:५६
किन उडान कर्मचारीहरु प्रायः जसो महिलाहरु हुन्छन् ? यसको पछाडि यस्तो छ रोचक कारण जान्न्नुहोस।
२०७८ असार १७ गते बिहिबार ०४:४८
सम्बन्ध वा मित्रता बनाउनु अघि यी चार कुरा जाच्नुहोस कि व्यक्ती कस्तो छ कहिल्यै धो, का मिल्दैन ।
२०७८ असार १३ गते आईतबार ०१:२७
विदुर नीति: यी ३ स्वभावका व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य कुरा कहिलै नभन्नुहोस, नत्र तपाईलाई नो;क्सान हुन सक्छ ।
२०७७ चैत २७ गते शुक्रबार १२:५६